Bloopers | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! Bloopers | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
ဒါကအသစ်တခုအွန်လိုင်းဖြစ်ပါသည် slot နှစ်ခု SMS ကိုငွေပေးချေမှု site ကို ဆတ်စတူဒီယိုတို့ကဖွင့်လှစ်. ဒီရုပ်ရှင်-ရေးရာ Bloopers အပေါငျးတို့သမတ် devices တွေကိုဖြတ်ပြီးပြ သ. ရ. အဆိုပါ orchestral ရုပ်ရှင်တေးသံများနှင့်အတူ, reels အားလုံးရုပ်ရှင်-ဆက်စပ်ပုံရိပ်ပါဝင်သည်. ဒါဟာအချို့တကယ်ကောင်းတဲ့ဆုကြေးငွေ features တွေကမ်းလှမ်းတဲ့ဖျော်ဖြေမှု slot ကဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်.
နယူး slot နှစ်ခု SMS ကိုငွေပေးချေမှု site ကိုအတွက် Play နှင့်ဦးဝင်း
ဤသည် slot ကဂိမ်းနှင့်အတူကြွလာ5ရက်ကြောင့်မှားယွင်း,3အတန်းနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများ 243 တစ်ဦးအနိုင်ရရှိရှိသည်ဖို့နည်းလမ်းတွေ. ဒီ slot ကဂိမ်းများအတွက်မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုတက်သတ်မှတ်နှင့်ကစားသမားမှအမျိုးမျိုးသောဇာတ်ကောင်မိတ်ဆက်တဲ့ကောင်းတဲ့မိတ်ဆက်ဗီဒီယိုအားလည်းရှိပါသည်. အဆိုပါကစားသမား£ 0.25 ၏နိမ့်ဆုံးလောင်းကြေးနှင့်အတူဂိမ်းစတင်£ 100.00 အများဆုံးလောင်းကြေးနိုင်ပါတယ်. ဤသည်ကို SMS ငွေပေးချေမှု site ကိုလည်းအကြောင်းကို 600x ကစားသမားရဲ့ရှယ်ယာများ၏ထီပေါက်ကမ်းလှမ်း slots.
ယခုအသစ် slot ကတစ်ဦးသည်ယောက်ျားနှင့်အမျိုးသမီးဦးဆောင်ကြယ်ကဲ့သို့မြင့်မားတဲ့တန်ဖိုးကသင်္ကေတများပါဝင်ပါသည်, ရုပ်ရှင်နှင့်ဆန်ဘုတ်အဖွဲ့ reels. သို့သော်ငြားလည်း, 10, J ကို, မေး, K သည်, နှင့် A အောက်ပိုင်းတန်ဖိုးများအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြတယ်. အဆိုပါရိုင်းသင်္ကေတတောရိုင်း Bloopers လိုဂိုကသရုပျဖျောဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာအပိုဆုသင်္ကေတအနေဖြင့်ဆိတ်ကွယ်ရာအပေါငျးတို့သညျအခွားသင်္ကေတများနေရာတွင်အစားထိုးပါလိမ့်မယ်. ဆုကြေးငွေသင်္ကေတကြယ်များ '' Fame ၏လမ်းလျှောက် '' ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ဤအဓိကအင်္ဂါရပ်ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းသွားရမည်အကြောင်း.
slot နှစ်ခု SMS ကိုငွေပေးချေမှုဆိုက်နှင့်အပိုဆုအင်္ဂါရပ်များခံစားကြည့်ပါ
ဒါကအခမဲ့ဗိုင်းငင်ပြီးအခြေစိုက်စခန်းဂိမ်းအတွင်းကျပန်းပေါ်လာသော. အကြောင်းကိုရှိပါတယ်5အဆိုပါ reels အပေါ်သို့လှည့်လည်ခြင်းနှင့်လည်းအောက်ပါအတိုင်း mini-ဆုကြေးငွေဆုချကြောင်းကွဲပြားခြားနားသော Blooper ဇာတ်ကောင်:
အသံ Tech မှ- ဤသည် Blooper အဆိုပါ reels အပေါ်သို့စေးကပ်လွင်ပြင်နေရာနှင့်အခမဲ့လှည့်ဖျားဆု.
တန့်က Man- ဤသည် Blooper အဆိုပါတိုးချဲ့ကိုတောသို့လွင်ပြင်လွှဲပြောင်း.
ရှုး- ဤသည် Blooper သစ်ကိုကအနိုင်ဂိုးပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းနိုငျသော '' ကျသွားသင်္ကေတ '' ဆု.
မိတ်ကပ်- ဤသည် Blooper အပိုအခမဲ့လှည့်ခြင်းများဆု.
Fix-It- ဤသည် Blooper ကအနိုင်ဂိုးပေါင်းစပ်ဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်ပတ်လည်ရှိသင်္ကေတများလှုံ့ဆျော.
အခမဲ့လှည့်ခြင်းများဆင်းသက်ခြင်းဖြင့် activated ရလိမ့်မယ်3လက်ဝဲထံမှ reels ပေါ်မှာညာဘက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဆုကြေးငွေကြယ်များ. ကြယ်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အထူးသဖြင့် Blooper များအတွက်လိုဂိုကိုပြသပါလိမ့်မယ်. လည်း, ဤအလွတ်လှည့်ခြင်းများပတ်ပတ်လည်အတွင်းမှာတက်ကြွဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်.